Iindaba kunye neeTrends |
ngu admin nge-20-08-03
ngu admin nge-20-07-28
I-TY TexChem ibingelele utyelelo lukaGarry
Emhlabeni apho kuhlala khona abantu, phantse amaTshayina asebenzisa ii-chopstick. Apho kukho iimpahla, ukuhlamba, ukuchetywa kunye nokudaya, ukuprinta kunye neepeyinti yokudaya, kubonakala ngathi kukho ukusetyenziswa kwezixhobo ezincedisayo ezivela kwi-TY TexChem. Iimali ezincedisayo ezithengisiweyo azithengiswa eTshayina kuphela, kodwa nakwamanye amazwe, iindawo ezikuf ...
Ubume bokuhlala kumzi-mveliso weYarn eIndiya buyaqhubeka ukonakala
Ingxelo yabahlalutyi baseIndiya ithi nangona amaxabiso e-cotton e-India esezantsi kakhulu kwaye i-mill mill zekotoni ezixhamla kwimveliso, ukuvalwa kunye nokuvalwa okubangelwe bubhubhane kuya kwehla imfuno yabathengi kwiinyanga ezintandathu ezizayo. Ngelixa i-covid-19 iyakuchaphazela ukungasebenzi kwemali ikakhulu ...
Ngaba uyazi kakuhle eyona polyester ixhaphakileyo yokushicilela kunye neyokushicilela udayi?
Ipolyester luhlobo olubalulekileyo lwefayibha eyenziweyo, kwaye ligama lokurhweba lefayilini yephayinti e China. Usebenzisa i-PTA okanye i-dimethyl terephthalate (DMT) kunye ne-ethylene glycol (MEG) njengemathiriyeli eluhlaza ngokusebenzisa i-esterization okanye i-transmitization kunye ne-polycondroll, ipolymer yokwenza i-polymer - uhlobo ...
Emva kokudaya ilaphu emva kokuba ugqibe, kutheni ukukhanya kwemibala kuyakutshintsha? Yintoni ekufuneka uyenze ngayo?
ngu admin nge-20-05-19
Emva kokudaya ilaphu emva kokuba ugqibe, kutheni ukukhanya kwemibala kuyakutshintsha? Yintoni ekufuneka uyenze ngayo? 1.Izenzi emva kokudaya kunye nokugqitywa, umbala kunye nokukhanya kwendwangu kuya kutshintsha ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Le yinto eqhelekileyo yokudaya. Ngokutsho kohlalutyo, ezi zinto zilandelayo zivaliwe ...
Unobangela wokungafani kwemibala ye-denim
Uphuhliso lweempahla zedenim kwilizwe lethu sele kudlulile amashumi eminyaka, nangona ukuqala kusemva kwexesha, kodwa ke uphuhliso lukhawuleze kakhulu.Ngoku, iimpahla zodidi lweden zingene kwinqanaba lokuvuthwa. Ngophuhliso lwe-The Times, iimpahla ze-cowboy zihlala zihamba phambili. Okwangoku, China̵ ...
Ukusetyenziswa kwesinyithi kuprinta i-pigment kunye nemeko yayo ngokubanzi
Iarhente ethambisayo, eneneni iluluhlobo lomncedisi wezonyango, osetyenziselwa ukushicilela kwendwangu kunye nemveliso yokuhombisa, ayinakwenza kuphela ukuqina kwamabala, ithintele imeko yokuhamba okuxhonywe kulwakhiwo, kwaye inokunika ukuloba iipropathi zoomatshini ezilungileyo kunye nozinzo lokugcina. E ...
Ummeli omtsha we-anti-phenol ophuzi uyothusa ngendlela emangalisayo
Ekuqaleni koNyaka oMtsha, ngokwemfuno yemakethi, I-Dongguan taiyang machiza e-machining co., L. Iphehlelele imveliso entsha yokuncedisa ngelaphu, ebizwa ngokuba yi-anti-phenol yellow arhente tyyr-88a. Kuyaqondwa ukuba le mveliso yikhompawundi ye-anionic ekhethekileyo, efanelekileyo kwi-polyamide fib ...
Ukuphononongwa komgaqo-nkqubo wesicelo esimhlophe
Yintoni i-whitener Whitener eyikudidi lwezinto eziphilayo, ingabuphucula ubumhlophe bendwangu yefayibha kunye nephepha, ekwabizwa ngokuba yimilowo mhlophe, umbala omhlophe ombala. Umgaqo wesicelo esivela mhlophe kuba ilaphu lihlala linemibala engcolisekileyo yombala kunye noyheli, ukusetyenziswa ngokubanzi kweekhemic ...
Ukuphononongwa kweempawu ze-hygroscopic kunye ne-perspirant kunye nokusetyenziswa kwayo kwimveliso
I-Hygroscopic kunye ne-perspirant ikwangumncedisi wokugqitywa kwe-hygroscopic kunye nokugqitywa kokuqhubeka. Luhlobo lohlobo lwe-polymer engeyo-ionic hydrophilic. Ukufunxa kokucekeceka kunye nokususwa kwesiko kwilaphu lokwenyani kukulenza ilaphu ukuba lingafumani manzi, ukufunxa kokufuma, ukomisa ngokukhawuleza kunye nenye into ...
Iimpawu zomenzeli oGciniweyo ngokuchasene neendwangu zelize kunye nohlalutyo lwesicelo kwicandelo
I-arhente yokuchasene namabala, njengoko negama lisitsho, kukuthintela ukwenzeka kwendlu anti-ukuntywila.Xa ujonge izinto ezahlukileyo zesicelo, iarhente yokulwa ibala inokwahlula-hlulwa yi-arhente yokulwa ibala, i-arhente esebenzayo yokubamba amabala. , njl.1. Inkqubo ye-Acid anti-stain: ...